Cudurka Duumada/kaneecada. | Somali Health
Home Cudurada Cudurka Duumada/kaneecada.
Cudurka Duumada/kaneecada, in ka badan 500 milyuun oo dad ah, ayuu sanad kasta ku dhacaa, halka, 1 ilaa 3 milyan ey u dhintaan. Dhimashada iyo ku dhicidda cudurka, waxa ey u badantahay dhullalka kuleylaha, sida meello ka mid ah Afrika, Aasiya iyo Koonfurta Ameerika.. sanadka 2014, 12,120 kun oo bukaan oo qaba cudurka Duumada/kaneecada ayaa la diiwaan geliyay Soomaaliya
Duumadu/Kaneecada, waa cudur ey sababto, kaneeco sumeysan oo qaniinta dadka. Kaneecadu waa nooca dhedigga, oo la yiraahdo ‘Anopheles’.Anopheles waxa ey qaataa, noolaha sababa cudurka oo loo yaqaano‘Plasmodium’, kaas oo keena Duumada/Kaneecada.
Haddaba, noolaha sababa xanuunka Duumada/kaneecada, ayaa raaca dhiigga, waxa uuna tagaa beerka, si uu ugu tarmo, marka ey ka soo baxaan beerka, ayay dib ugu soo laabtaan dhiigga, si ey cudurka u bilaabbaan laba toddobaad ka dib, inkastoo, noocyo ka mid ah kaneecada, ey ku jiri karaan beerka, muddo aad u dheer.
Calaamadaha lagu garto Duumada/kaneecada ayaa ah: qandho/xumad, dhaxan, madax xanuun, jir xanuun, dhabar xanuun, xanuunka kala goysyada, matag, qar-qaryo, dhidid, iyo calaamado kale oo badan. Haddaba, calaamadahaan waxaa suurtagal ah, in ey qofka ku soo boodaan, amaba soo bixitaan koodu qaato, toddobaad iyo ka badan, kadib marka ey qaniinto kaneeco sumeysan.
Dadka ey Duumadu/kaneecadu ku dhacdo, marar badan waxay yeeshaan difaac jir, oo aan buuxin, balse, difaacaas waqti yar buu ku tagaa, adigoo 1 ilaa 2 sano guduhood, aad la mid noqon kartid, qofka aan hore ugu dhicinDuumo/kaneeco, markaasne uma lihid difaac, xataa hadii ay goor hore kugu dhacday Duumo/kaneeco.
Ma jirro talaal lagaga hortago Duumada/kaneecada, balse, waxay sababtaa xanuun xun. oo keeni kara dhimasho, kuguna dilli karo 12 saac gudohood, sidaas darteed, waxaa laga maarmaan ah, in aad sameysid ka hortag, iskana ilaalisid qaniinyada kaneecada. Kaneecada waxay dadka qaniintaa subaxa hore iyo maqribkii inta badan. Haddaba, sameey arrimahan: Gasho dhar kuu qariya gacmaha iyo lugaha, seexo guri ku leh shabaq dariishadaha, seexo sariir leh mara kaneeco, ku buufi gurigga dawooyinga dila kaneecada.
Marka laga hadlaayo daawadda Duumada/kaneecada, waxa jira dawooyin kala nooc ah oo la isticmaalo, weydii takhtarkaaga nooca iyo sida aad u liqaysid. Waa lagama maarmaan in adiga iyo caruurtuba aad qaadataan dawada ka hortagga kaneecada, una qaado dawada sida loo qoray.
Previous articleBukaannada qaba Kansarka ku dhaca hunguri-mareenka oo ku soo badanaya Soomaaliya
Next articleJob: Project Officer, Mogadishu, Somalia
Hassan Kheyre, waa dhakhtar ku taqasusay cudurada faafa una shaqeeya hey'adda ururka dhaqaatiirta aan xadduuda laheyn (MSF). Sidoo kale, waxa uu ka mid yahay tafaftirayaasha shabakadda. kala xiriir ciwaanadaan:-